မျိုးမြင့်ဆွေ - ဝီကီပီးဒီးယား
(၁-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။-၁၉၃၃)အောက်တိုဘာ ၁၊ ၁၉၃၃
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၉၀(၁၉၉၀-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၂"။-၁၃) (အသက် ၅၆)
စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ တေးရေး
မျိုးမြင့်ဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရွှေဘိုခရိုင် ရေဦးမြို့နယ် မန်ကျည်းတော ရွာတွင် အဖ ကျောင်းဆရာ ဦးအေးမောင်၊ အမိ ဒေါ်လေးငွေ တို့က ၁၉၃၃ ခု အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၈ ယောက်တွင် ဒုတိယမြောက် ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးမြသောင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာ များကို မန္တလေးထုတ် ဗဟိုစည်၊ မန္တလေး သူရိယ၊ နဂါးနီ၊ မြတ်ရတနာ၊ ပန်တော်ဆက် စသည့် စာနယ်ဇင်း များနှင့် ရန်ကုန်ထုတ် မြဝတီ၊ သွေးသောက်၊ ငွေတာရီ၊ သင့်ဘဝ စသည့် စာနယ်ဇင်း များတွင် ရေးခဲ့သည်။ မိုးသောက်ယံ ကဗျာများ (၁၉၆၁)၊ အလင်းခေတ် ကဗျာများ (၁၉၆၅)၊ လူသားနှင့် ဝန်းကျင် ကဗျာများ (ချစ်ဒေါင်းနွယ် ၏ 'သမီးပေး ယာ' ဝတ္ထု ကဗျာနှင့် ပူးတွဲ၍ "၁၉၆၇ ခုနှစ် အမျိုးသား စာပေဆုရ ကဗျာများ" အမည်နှင့် ထုတ်သည်။) (၁၉၇၂)၊ ကလေးအဖော် ရွှေဇီးကွက် (၁၉၇၇)၊ လိမ္မာယဉ်ကျေး မေ့ရင်သွေး ကဗျာများ (၁၉၇၈)၊ မှန်ထဲက သစ္စာနှင့် အခြား ကဗျာများ (၁၉၉၅) တို့မှာ ထင်ရှားသည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ် မြတ်ရတနာ မဂ္ဂဇင်း စာပေ ပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေမန်းတောင်တော် ကဗျာဖြင့် ပထမဆု၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် အထက် မြန်မာနိုင်ငံ စာရေး ဆရာများ အသင်း စာဆိုတော်နှင့် စာပေ ပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံတော်သစ် ဆီသို့ ကဗျာဖြင့် ဒုတိယဆု၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဓနသဟာယ စာစောင် ကဗျာ ပြိုင်ပွဲတွင် မောင်ကြီးတို့ရွာ ကဗျာဖြင့် ပထမဆု၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ် အမျိုးသား စာပေဆုကို လူသားနှင့်ဝန်းကျင် ကဗျာများ စာမူဖြင့် ပထမဆု ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့သည်။
တေးသီချင်း များစွာ ကိုလည်း ရေးစပ် ခဲ့သည်။ ကျောက်ခဲ၊ သဇင်၊ ဂျိန်းဖောပွဲတော် စသည့် ရုပ်ရှင် တေးများ၊ မီးခိုးလိုလူ တိမ်လိုလူ၊ ထရံပေါက်က နေပြောက် ကလေး၊ မေတ္တာမိုး စသည့် မြန်မာ့ အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား တေးသီချင်းများ၊ မန္တလေး မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓဝင် ပြခန်း ကက်ဆက်ခွေ သီချင်းများမှာ ထင်ရှားသည်။
ပန်းချီ ပညာ ကိုလည်း လေ့လာ လိုက်စား ခဲ့ရာ ပန်းချီပုံရေး ပုံဆွဲကို အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုတွင် ဗြိတိသျှ အသံလွှင့် ကော်ပိုရေးရှင်း နှစ် ၅၀ မြောက် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ကျင်းပသော ၇၂ နိုင်ငံ ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ့ ပန်းချီ ပြိုင်ပွဲတွင် ဝေးမြေခြားမှ စကားလက်ဆောင်၊ တေးလက်ဆောင် ပန်းချီကားဖြင့် ဗြိတိသျှ အသံလွှင့် ကော်ပိုရေးရှင်း အရှေ့တိုင်း ဌာနခွဲ၏ ပထမ ဆုကို ရရှိ ခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်ချိန် အထိ ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုတိုပေါင်း ၁၅၀ ကျော်၊ ကဗျာပေါင်း ၅၀၀ ကျော်၊ သီချင်းပေါင်း ၂၅၀ ကျော်နှင့် ရေဆေး၊ ဆီဆေး၊ ခဲမှုန်း စသည့် ပန်းချီ ကားပေါင်း ၇၀၀ ကျော် ပြုစု ရေးဆွဲ ခဲ့သည်။ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခြင်း မပြုရ သေးသည့် ကြုံရာလမ်း ကဗျာ စာအုပ် လက်ရေးမူ ကျန်ရှိ ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။
↑ ရာပြည့် ဦးစိုးညွန့် (ဇူလိုင် ၂၀၀၅). ၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ ၁ဝဝ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျုဉ်း။
↑ ဒဂုန်ရွှေမျှား. မြန်မာနိုင်ငံ စာပေ ဆုများ, ၂၉၅ - ၂၉၇။
↑ နေထွတ်. မန္တလေး အဘိဓာန်, ၂၅၃။
↑ မျိုးမြင့်ဆွေ (၁၉၉၅). မှန်ထဲက သစ္စာနှင့် အခြား ကဗျာများ။
↑ (၁၉၉၁) မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ်, ၂၉၈ - ၂၉၉။
↑ ကဗျာဆရာ မောင်နွေထက် (မန္တလေး) ၏ ရေးသား ပေးပို့ချက် စာ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျိုးမြင့်ဆွေ&oldid=340845" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၄:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။